Zim hunger: US, UK pledge $43m for food relief | News24
Britain and the United States have reportedly launched a programme to rescue at least 650 000 Zimbabwean hunger victims, with the two countries pledging to provide up to $43m for food aid.
Reports indicated that Zimbabwe needed to import at least 700 000 tons of maize from neighbouring countries to avert a food crisis, with analysts saying this would cost the country's cash-strapped treasury around $224m.
Vice President Emmerson Mnangagwa recently expressed concern over the food imports, saying they were draining the country's already strained resources.
The report quoted the USAID mission director, Stephanie Funk, as saying there was a need to find a solution to the issue of hunger in Zimbabwe by addressing the "root cause".
"Since 2002, we have provided more than $1bn in humanitarian assistance to millions of vulnerable Zimbabweans. USAID is providing $27m to meet immediate food security needs of hundreds of thousands of rural Zimbabweans," Funk was quoted as saying.
Funk added: "However, while recognising that there is need for this type of assistance, humanitarian assistance alone is not enough. We need to address the root cause of poverty and hunger..."
Since 2000, Zimbabwe has struggled to feed its people due to droughts and President Robert Mugabe's seizure of white-owned farms to resettle landless blacks, which badly affected commercial agriculture.